Mareykanka oo Ciidankiisa kala baxaya Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
WASHINGTON - Madaxweyne Trump ayaa u sheegay la taliyeyaasha sarsare inuu doonayo inuu Ciidamada Mareykanka kasoo saaro Soomaaliya, si uu uga dhabeeyo balanqaadyadii ololaha ee ahaa inuu askarta dibadda ku sugan dib ugu soo celinayo dalkooda.
Pentagon-ka ayaa bilaabay diyaarinta qorshayaasha Madaxweynaha, waxaana howsha ku lug lahaa Lataliyaha Amniga Qaranka Robert O’Brien, Xoghayaha Difaaca Mark Esper iyo Gudoomiyaha taliyeyaasha Ciidanka Mark Milley, sida laga soo xigtay dad codsaday in magacyadooda la qariyo oo uu qoray Bloomberg.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi ayaa wareysiga ku sheegay inuu jeclaan lahaa Ciidamada Mareykanka inay sii joogaan, isagoo intaas ku daray inuu rumeysan yahay in dalkiisa oo kaashanaya taageerada Mareykanka uu qarka u saaran yahay inuu ka adkaado Al-Shabaab.
"Runtii waan ka mahadcelineynaa taageerada Mareykanka, waana ku faraxsanahay waxa Mareykanka uu qabtay, waxaana jeclaan lahaa inaan aragno Ciidamada oo sii joogaya illaa iyo inta laga wiiqayo awoodda Al-Shabaab 100%," ayuu yiri Farmaajo.
Go'aanka Trump ayaa si hoose uga careysiisay Saraakiisha amniga, oo ka digaya inay Al-Shabaab ka faa'idaysato ka bixitaanka Ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya, kadibna ay dib ula wareegto goobihii horey looga saarey.
Kelly Cahalan, oo ah afhayeen u hadlay Taliska Mareykanka ee Afrika, ayaa diiday inay ka hadasho joogitaanka Ciidamada mustaqbalka, laakiin waxay sheegtay in Mareykanka “ay weli ka go’an tahay la shaqeynta Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah si loo xoojiyo xasilloonida gobolka ee muddada fog”.
Dad badan oo Mareykan ah ayaa laga yaabaa inay layaabaan markay ogaadaan in Ciidamada Mareykanka ay ku sugan yihiin Soomaaliya, oo ay ku xasuustaan 18 askari oo looga dilay Muqdisho sanadkii 1994.
Taasi waxay daba socotey howlgalkii "rajo-soo-celinta" kaasoo ku dhamaadey in askar Mareykan ah lagu diley kadib dagaal qaraar oo Muqdisho ka dhacay kaasoo lagu soo bandhigay buug iyo filim la yiraahdo "Black Hawk Down."
Diyaaradaha Mareykanka ayaa beegsi ku hayay Al-Shabaab lixdii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo ay ku dileen Koonfurta hogaamiyaal uu ku jiro Axmed Godane, oo lagu khaarijiyay September 2014 duleedka Baraawe. Shacab badan ayaa lagu xasuuqay duqeymaha drones-ka.
0 Comments Topics: africom alshabaab farmaajo trump